မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဘလော့ပေါ်က မဗေဒါ့ မွေးနေ့.. အားမနာနဲ့နော်..
Posted by mabaydar at 4:13 PM
happy birthday နော် ။ မီးလေးဆီမှာတွေ့ လို့ 
လိုက်လာတာ။ ပျော်စရာကောင်းသော ဘ၀လေးကိုပိုင်ဆိုင် သူဖြစ်ပါစေလို့ 
2/06/2008 4:34 PM
Happy Birthday ပါအစ်မရေ။ ကောင်းလိုက်တာ။ ဒီလထဲမှာ မွေးနေ့ရှင်တွေတပုံကြီးပဲ။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်။ လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝပါစေ အစ်မရေ။
2/08/2008 1:02 PM
Happy Birthday ပါ မဗေဒါ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်
မဗေဒါရေ မွေးနေ့လက်ဆောင်မပေးပဲ လာဝါးလိုက်တာ စုံလို့ စုံလို့ပဲ။ ကျနော်သိသလောက် ဘလော့ဂါမွေးနေ့ထဲမှာ မဗေဒါကျွေးပဲက အများဆုံးထင်ပ။ အဲ .. စားပြီးမှ ဆုတောင်းဖို့ သတိရပြီ။ ဘယ်လောက်မြောက် မွေးနေ့ဆိုတာတော့ မေ၇းထားလို့ မသိရပေမယ့် ခုမွေးနေ့မှသည် နောင် မွေးနေ့မှသည် နောင်မွေးနေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ။ ချစ်သောသူနဲ့လည်း ပေါင်းဖက်ရပါစေ... :)
Happy birthday to you, Ma Bay Dar!
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များစွတိုင် ပျော်ရွှင်ပါစေ အဆင်ပြေပါစေ မဗေဒါရေ ...။
Happy birthday Ma Bay Dar :)
HAPPY BIRTHDAY...! အိပ်မက်တွေထဲမှ အမြန်ဆုံးနိုးထ နိုင်ပါစေ... hope you will know what i mean... :) ..... လူကိုသက်သက် စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်တယ်... ကျွေးထားတာတွေကြည့်ပြီး ဗိုက်စာလို့ ထမင်းအိုးကိုဖွင့်...စားစရာဘာဟင်းရှိလဲ ကြည့်လိုက်တော့်.......... :( ..... Lol... အလကားစတာ ကြုံမှပဲ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတော့မယ်... See yA!
2/11/2008 2:10 AM
happy birthday, I love kulfi icecream the best.
နစ်ကူးအပြီးမှာ မွေးတာ ကောင်းတာပေ့ါ။ ဆုတောင်းပေး မယ် မွေးနေ့ မှသည် မင်္ဂလာရှိသော နေ့ လေးများကို မင်္ဂလာရှိသူများနှင့်သာ တွေ့ ဆုံရပြီး မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံသော စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း။ လိုအင်ဆန်ဒ များရရှိနိုင်ပါစေ။
Happy Birthday ပါ မဗေဒါရေ ...
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေသော ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ... ပြီးတော့ ... အချစ်ရေး ကံကောင်းပြီး အမြန်ဆုံးနီးစပ်နိုင်ပါစေ ဗျို့ :P
2/11/2008 5:11 AM
ဘဲသွေးနဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ နှစ်ပွဲတိတိစားပြီး ရွှေရင်အေးထဲက ကျောက်ကျောတွေချည်း ရွေးစားသွားတယ်.... ရှယ်ပဲ.....
thanksamillion, billion, trillion, zillion....
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာတိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သောဘ၀နှင့် အောင်မြင်မှုများစွာကို ထပ်တူရရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ချစ်သောသူနှင့် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ အစားအသောက်တွေက များလိုက်တာ မဗေဒါရေ။ ဘာယူစားသွားရမှန်းတောင်မသိဘူး။ လင်းလက်အကြိုက်ဆုံး ပဲပြုတ်နံပြားကိုပဲ အရင်ယူစားလိုက်ပါတယ်။ ဆီပြန်ဟင်းတွေတော့ အီနေလို့ အချိုပွဲနဲ့ ဖာလူဒါပဲ သောက်သွားတော့တယ်။
2/11/2008 9:20 AM
ရောက်တာ နောက်ကျသွားတယ်.. ကုန်ပြီထင်တယ်.. ။ နောက်နှစ်မှ စောစောလာစားတော့မယ်....
ပျော်စရာ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ
ဘ၀ကို အခက်အခဲမရှိ အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ
မွေးနေ့မှစပြီး နောက်နှစ်များစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းပါစေ....
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲကလွဲရင် ကျန်တာ အကုန်ကြိုက်တယ်။ ပုဇွန်ထုပ်လဲ ဖွက်ယူသွားသေး... ဟိ...
၀က်သားတုတ်ထိုး အရမ်းကြိုက်လို့ ထမင်းလွတ် တွယ်သွားတယ်။ ပုဇွန်ဟင်းတော့ မကြိုက်ဖူးဗျ။
မသိဘူးဗျာ...တုတ်ထိုးမြင်ရင်မနေနိုင်လို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ၀င်စားသွားတယ်။ မခင်သေးလဲ အခုခင်လိုက်တော့နော်။
2/12/2008 2:19 AM
ပျော်စရာ မွေးနေ့လေးပါ ဗေဒါရေ စားစရာတွေကလဲ အစုံပဲ ဗေဒါ့ဖေဖေရဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို ဆွဲပြီးသကာလ မွန်တော့ လက်ဖက်ဝိုင်းကမထတော့ဘူး အဲဒါနှစ်မျိုးကို မွန်အသဲစွဲပဲ သိလား
Sorry for My late birthday wish